Waa maxay DFU Mode?
DFU u taagan tahay Device firmware Update. Waa xaalad ah in aad ku qori kartaa aad iPhone galay meesha ay interface karaa Lugood laakiin ma shuban nidaamka qalliinka iPhone ama loader boot. Waad beddeli kartaa oo dooran firmware aad rabto in aad rakibto rogtid oo aad iPhone hoos hab DFU. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali lahaa hab DFU haddii aad rabto in aad rakibto version hore ee macruufka, JAILBREAK aad iPhone ama lagu furo aad SIM. Haddii (sabab kasta ha) soo kabashada caadiga ah aan la shaqeeyo si aad u soo laabto xaalad shaqeeya hesho qalab aad, DFU laga yaabaa in ay kuu caawiyaan.
Sida lagu Helo Your iPhone gala DFU Mode
Tan iyo DFU caawin kara si ay u xaliyaan arrimaha adag sida, sida aan ku qori kartaa iPhone ah (oo ay ku jiraan arrimo 9 iPhone) galay hab DFU? Waa inaanad shuqul adag farsamo. Dhab ahaantii, qof walba la iPhone ah oo keliya u samayn kartaa adigoo soo socda midkood habka hoos ku qoran.
1. Geli DFU Mode Iyadoo Lugood,
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in computer iyo ordi Lugood. Tallaabada 2. leexi iPhone off adigoo riixaya badhanka Power on top aad iPhone. Tallaabada 3. Press iyo Xukun iyo Home badhamada waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi. Tallaabada 4. Ka dib, sii daayo button Power iyo sii riixaya badhanka Home 10 ilbiriqsi oo kale ah. Tallaabada 5. Marka aad ka Lugood arki fariin pop-up ah sida soo socota, waxaad u sheegi kartaa fartaada riixaya badhanka Home tagaan.
2. Ku qor DFU Mode Iyadoo Wondershare Dr.Fone ee macruufka:
Haddii aadan haysan Lugood lagu rakibay on your computer oo aadan rabin in la, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery .
Download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah.
Connect aad iPhone, iPad ama iPod taabto oo ay maamulaan barnaamijka on your computer. Markaas tagaan Mode Advanced oo aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Hadda raac tallaabooyinka uu furmo suuqa soo galaya si ay u bilaabaan hab DFU in tallaabooyinka.
Tallaabada 1. Qabo qalab aad, ka dibna riix cagaaran Start button. Tallaabada 2. Ka dib markii gujinaya ka Start button, riix Power iyo Guriga waqti isku mid ah si degdeg ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi. Tallaabada 3. Marka 10 seconds maray, sii daayo button Power hadda, Laakiinse ay xajiyaan cadaadinaya Home muddo 10 ilbiriqsi oo kale. Tallaabada 4. Marka aad ku wargeliyay in aad si guul leh ku soo gashay hab DFU, kaa fasaxi kara badhanka Home ah.
Fiiro gaar ah: Marka aad iPhone waa in hab DFU, shaashadda uu noqon doono mid madow. Haddii aan, aad tahay ma in hab DFU. By jidkii, Wondershare Dr.Fone ee macruufka kaa caawin karaan oo kaliya in aad iPhone 4 / 3GS, iPad iyo iPod 1 xiriiri 4 in ay galaan hab DFU.
Sidee uga baxdo DFU Mode Kartid Qalabka macruufka
Ka bixidda DFU Mode Gacanta
Haddii aad iPhone ku xayiran in hab DFU, habka ugu fudud si aad u hesho soo baxay waxaa riixaya batoonka iyo button Home waqti isku mid ah ilaa 10 ilbiriqsi ah, ilaa aad ka aragto logo Apple u muuqataa. Habkan u shaqeeya oo dhan iPhone 6s (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS, iyo sidoo kale iPad iyo iPod soo xiriir haddii aad rabtid in aad isku day ah .
Sidee uga baxdo DFU Mode la Dr.Fone ee macruufka 1 click
Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) kaa caawin karaan inaad baxdo hab DFU ka mid ah.
Connect aad iPhonn, iPad ama iPod xiriiri u computer iyo orod Wondershare Dr.Fone ee macruufka (la heli karo macruufka 9). Markaas si toos ah baarista iPhone oo waxaad heli doontaa suuqa kala ah sida soo socota.
Riix qalab guuleysatey in ay caadi button ee geeska hoose ee bidix ee suuqa. Markaas ka mid ah hab DFU aad hadda heli kartaa qalab macruufka!
Marka aad ka fekerto qalab aad waa la qaboojiyey, ha ka welwelin wax badan oo iska sug daqiiqad. Mararka qaarkood, waxa loo baahan yahay in muddo ah ku guuleysatey. Haddii ay weli ma turjumayo wax, isku day in aad riix Power iyo button Home ah waqti isku mid ah muddo ah, ilaa aad ka arki kartaa Apple logo cad shaashadda. Markaas qalab aad bilaabi doonaan in ay caadi ah in dhowr ilbiriqsi.
Haddii aad qabto su'aal kale oo ku saabsan sida in ay galaan iyo ka bixitaanka hab DFU, ama aad leedahay qaar ka mid ah talooyin wanaagsan, soo dhaweeyaa si ay halkan nala wadaagaan.
> Resource > iPhone > DFU Mode: Sida loo gala iyo Exit DFU Mode of Your Device macruufka